Shazam inotangisa kunyorera kweApple Watch nekuvandudza kunoshamisa | Ndinobva mac
Shazam anotangisa kunyorera kweApple Watch nekuvandudza kunoshamisa
Yakanga iri nguva! Shazam akagadzirisa mashandisiro ayo eApple Watch, achitora mukana wekuuya kwewatchOS 4 uye iyo foray mumusika weiyo itsva Apple Watch Series 3. Zvino, sevhisi yekuteerera nekuziva mimhanzi, pamwe nemukana wekuve nerwiyo rwayo muruoko rwedu (kana ruoko rwedu) rwunotsanangudzwa nekukurumidza kuita, uye nechitarisiko chitsva.
Zviri nyore kwazvo. Ingovhura Shazam kubva pachiuno chako, pinda uye, mumasekondi mashoma, unenge uine zita rerwiyo chii chauri kuteerera, muimbi, makonsati anogona kuitika munharaunda mako, nziyo dzakafanana, mazwi, madudziro, ... kushandiswa kweapp iyi kunenge kwakakwana.
Iko kukoshesa kwakanyanya kweiyi yekuvandudza kuri pane inoyevedza kumhanya kuvandudzwa kunoitwa. Uye zvakare, inoenderana neiyo nyowani vhezheni yeWatch neLTE, saka yaizoshandawo zvisinei nekuti i iPhone yakabatana kana kwete Chitarisiko chitsva uye kureruka iyo iyo app yakapihwa inomirawo zvakanaka.
Uye zvakare, iyo inokutendera iwe kudzvanya kuti utange kuteerera, uye isu tinogona kukanganwa kuchengeta ruoko munzira yekumimhanzi, tichitarisa pachiratidziri kuti tione kana kutsvaga kwakakumbirwa kwatoitwa kare. Kutanga neshanduro iyi nyowani, Shazam anokuzivisa nekubata kudiki kana kutsvaga kwacho kwabudirira.
Pakati pezvimwe zvinhu, kubva ikozvino Shazam ichakubvumidza iwe kuti uteerere zvishoma rwiyo urwo iwe rwauri kutsvaga, pamwe neiyo iPhone application yatove kuitwa. Zvimiro izvo pasina mubvunzo zvinokwenenzvera kunosungirwa kunyorera muhomwe uye mawoko emunhu wese mushandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Shazam anotangisa kunyorera kweApple Watch nekuvandudza kunoshamisa
Miguel Mena Makatuni akadaro
Karito Nayadeth Alvarez
Pindura Miguel Mena Cartes
Iyo yekutanga beta yeTVOS 11.1 ikozvino inowanikwa kune vanogadzira
CleanMyMac yakagadziridzwa kuita vhezheni 3.9.0 nekuvandudza mashandiro